Ukufunda ukufunda isi-kuba abantwana
Ngoku, makhe yiya kwi – discovery zabo iifomu ezahlukeneyo. Apha injongo ayisayi kuba kumenza khumbula, izakuba kakhulu kunzima. Oku inyathelo lesi-iza kwenzeka kamva ngomhla whiteboard. Apha, siza ngokulula bonisa yakhe visually indlela ileta kwathiwa ekuqaleni, phakathi, kwaye end ngoncedo vowels. Okokuqala sisebenzisa ndihamba ukwakha entsha maps kunye umbala iphepha eli lixa. Siya kufuneka zine -igqabi imibala ukuba sisebenzisa ke umhlambi ngayo isiqingatha ukufumana amabini anesibhozo name. Kwezi anamachaphaza, uqinisekile ukuba ndihamba ukubhala phinda-phinda kathathu leta kunye ngamnye vowel ezahluka-hlukileyo. Le yindlela sithi umsebenzi isigcawuname, inyathelo lesi-yi-ngena, sizama ukuba neli nesiphumo, nto enye ukubona umntwana wakho ukufunda noble Qur’an. Masha Allah, iintsuku, iiveki, iinyanga umsebenzi, kodwa kukho ke, nyana wam ngoku uyayazi iileta kwaye zabo izandi e yakho fingertips, okanye ngenye kwi-tip ka-ulwimi. Ngoku siza yiya kwi – ezinzima iimboniselo.
Yethu elandelayo imisebenzi ingaba izakuba kancinci inzima ngakumbi ukuze kuphunyezwe, ukwimo imidlalo, apho ukubaluleka kokwenza ezincinane iiseshoni, ngoko ke ukuba akekho kuba kakhulu burdensome kuba kuye. Kufuneka ukufumana kwinto ukuba motivates kwaye imisebenzi engcono kwi umntwana wakho. Comfortably umntwana wakho, ubuso ezingxoxweni ukuba begin lokuqala isifundo ukufunda. Wokuqala exercises ziya kusetyenziselwa kovavanyo bonke edlulileyo izifundo kwaye ndiya familiarize nabo oku entsha medium. Ukuqala nge-ekubhaleni iileta ye-alphabet omnye ngexesha, ecela kuye into ileta owubhalileyo. Oku kufuneka ukuba ibe breeze kuba kuye. Ubhale igama lakhe kwi-ephezulu ekhohlo ye-ithebhule kwaye yenza a ixesha ngalinye ukuba ufumana elungileyo impendulo, babe ngathi ukuba earn amanqaku. Ngoku, sibhala isibhoso umzekelo, iletanangendlela efanayo umgca, ndibhala le leta, ekuqaleni, phakathi, kwaye end ngokudibanisa a vowel kwaye eshiya a isithuba phakathi kwabo. Ngoko ke, ndiyabuza kuye ku-phinda okanye ukufunda ukuba lowo okanye yena uyayazi. Ngubani uza siya kunika njengoko ufunda:”BA-OODULADULA -BOU”. Njengoko kuba amakhadi, kodwa ngomhla itheyibhile.
Ingaba ngoluhlobo kuba zonke iileta
Ngoku, uyazazi kakuhle kakhulu isandi ka-iileta kwaye ukuba ukho abantu abaqhelekileyo kunye abanye kubo ngomhla wabo iindlela ezahlukileyo yokubhala, siza bhala ngoonobumba kwaye kubasindisa nje ngezantsi efakelwe ukuba ifomu amazwi isibini kathathu amagama apheleleyo. Hamba kakhulu ngokucotha, yenza wena ke, yena sele assimilated kulungile, yenza ezininzi phinda kwakhona imixholo kunye exercises.
Kule isifundo, baninzi uqokelelo
Kuba kuye ukufunda la mazwi kwaye zibandakanya njengoko entsha iileta. Oku isifundo kuthatha ezininzi ixesha, ingakumbi njengokuba kubhaliwe kanjalo ngeli xesha, ukuba siya kwenza kuye fumana ezintathu elide vowels. Sifuna ukuqalisa kwakhona, okanye kuqhubeka njengoko ufuna. Kuya kwenziwa kuye fumana ezintathu ezintsha elide vowels kwaye yabo entsha izandi apho yandisa. Uyayazi indlela ngoku, yonke into, kwenzeka ntoni ngomhla itheyibhile. Bhala ileta”BA”kunye vowel elide”ALIF”kwaye”BA”kunye vowel elide”Waw”kwaye”BA”kunye vowel elide”EDLULILEYO”kwaye ucele kuye ku-phinda. Ekuqaleni, olu qeqesho kunye amazwi kakhulu kuba nzima kuye, soloko bhala phantsi amazwi ilula kakhulu ukufunda kunye ubizo: kulula, ixesha ukuze ube efumana kusetyenziswa. Ukuqonda, apha kuwe ukwenza kwakhona i ntoni fumana iincwadi kuba ukufunda ukufunda nesiarabhu, nje ukuba kwenzeka ntoni ngomhla ithebhule kwaye yenza lula qeqesho kwaye yongeza kokukhona afihlakeleyo ukuba ingaba suited ukuba umntwana wakho. Elokuphetha, ukufunda indlela yokufunda isi-ukuba umntwana phambi ezintandathu ubudala, kuthatha umonde, kancinci imagination, elungileyo methodology kwaye kancinci ka-pedagogy. Kodwa, phezu kwazo zonke kuba mkhulu kwaye emangalisayo injongo:”ukuze abantwana bethu ukufunda lonke Quran
← Indlela Zibalisa Ukuba i-Arab Guy Likes Kuwe Idityanisiwe Ubomi
Indlela kuhlangana a gay guy kuba ezinzima budlelwane. (dating, iimifanekiso) - budlelwane nabanye Dating, umtshato, boyfriends, girlfriends, amadoda, abafazi, abahlobo, utsalekoname. Isixeko-Data Foram →